Orexin A ၏ရန်သူ (SB-334867) ပြန့်ပွားမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Wistar ကြွက်များတွင်အပြုသဘောဆောင်သောအပြုအမူနှင့်အရက်ကိုပိုမိုနှစ်သက်ခြင်းအပေါ်မူတည်သည် (2016) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn တွင်
အိန္ဒိယ J ကို Pharmacol ။ 2016 ဇန်နဝါရီ-ဖေဖော်ဝါရီ; 48 (1): 53-58 ။
Doi: 10.4103 / 0253-7613.174528
Santosh Mayannavar, KS Rashmi, Yalla Durga Rao က,1 Saraswati Yadavနှင့် ခ Ganaraja
နျူကလိယ accumbens (NACC) စွဲလမ်းနှင့်စားသုံးမိအပြုအမူအတွက်အခန်းကဏ္ဍရှိပါတယ်။ ဤသည်၌ပါဝင်ပတ်သက် orexinergic system ကိုအကဲဖြတ်ရန်နိုင်ရန်အတွက်ကျနော်တို့ Orexin တစ်ဦးကရန်ထုံမွှန်းနှင့်အစားအစာစားသုံးမှုအရည်စားသုံးမှုနှင့် Wistar ကြွက်များတွင်အရက် preference ကိုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်။
Inbred Wistar ကြွက် (n = 54) ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စမ်းသပ်ဆဲအုပ်စုများ (အနိမ့်ထိုးနှင့်မြင့်မားထိုး) သို့ခှဲဝေခဲ့ကြသည်။ stereotaxic နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခြင်း, လမ်းညွှန် cannula NACC ရောက်ရှိဖို့မြန်မာနိုင်ငံသအရပျ၌သတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ Orexin ၏အနိမ့်ထိုး (3 ng) နှင့်မြင့်မားသောထိုး (6 ng) တစ်ဦးကရန် (SB-334867) ထုံမွှန်းခဲ့သည်နှင့်အရက်များအတွက်အစားအစာစားသုံးမှု, ရေစားသုံးမှုနှင့်အရက်စားသုံးမှုနှင့်နှစ်ဦးကိုပုလင်းအခမဲ့ရွေးချယ်မှု preference ကိုစမ်းသပ်မှုထဲမှာထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည် စမ်းသပ်အုပ်စုသည်။ ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုသည်အတူတူပင်ဖြစ်ကြသည်နောက်တော်သို့လိုက်သည့်နည်းလမ်းများ၏ဆားပြုတ်ရည်များနှင့်အရာကြွင်းသမျှကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါတိုင်းတာမှုများချက်ချင်းပြုတ်ရည်ပြီးနောက်, 1 ဇ,2ဇ,4ဇရက်နှင့်မြေတပြင်လုံးသည်နေ့ရက်သည်ထွက်သယ်ဆောင်နှင့်ကိန်းဂဏန်းနှင့်စားပွဲအတွက်ကိုယ်စားပြုခဲ့သည်။
ချက်ချင်း 1 အတွက်ပြုတ်ရည်ပြီးနောက်လေ့လာတွေ့ရှိရေစားသုံးမှုအတွက်တစ်ဦးကျဆင်းခြင်းst ဇ (P <0.05) နှင့် 2nd ဇ (P <0.01), အနိမ့်ဆေးထိုးခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မြင့်မားတဲ့ထိုးအုပ်စုတွင်ပိုမိုသော။ အရက်သေစာသောက်သုံးခြင်းသည်လည်းအလားတူပုံစံမျိုးဖြစ်သည်။ ပုလင်းနှစ်လုံးရွေးချယ်မှုတွင်ကြွက်များသည်အရက်နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့် preference ကိုမှပြသခြင်းမရှိပါ။
ကုသကြွက်များတွင်အစားအသောက်နှင့်အရည်များ၏စားသုံးမှုအတွက်ထိုးမှီခိုလျှော့ချရေးရှိခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုစားသုံးမိအပြုအမူအတွက် orexinergic စနစ်တစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုသည်။ သို့သော် Orexin တစ်ဦးကအဆိုပါအကြိုးစင်တာ NACC အားဖြင့်အရက်စွဲ၏မော်ဂျူအတွက်အခန်းကဏ္ဍရှိသည်မဟုတ်ပေမည်။
အဓိကစကားလုံးတွေ: နျူကလိယ accumbens, အစားအစာ, Orexin-တစ်ဦးကရန် (SB-334867), ရေနှင့်အရက်
accumbens (NACC) ဝတ္ထုများမှထည့်သွင်းသည့်အပြုအမူများနှင့်စွဲကိုထိခိုက်ဖို့လူသိများသည်။ [1,2] ဒါကြောင့်လည်းဆုလာဘ်များနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။  နှစ်ဦးကွဲပြားခွဲဒေသများ NACC တှငျဖျောပွထား, ဤနှစ်ခုတိုင်းဒေသကြီးများ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက်ထပ်နေသည်ကိုတွေအများကြီးရှိသည်ထင်ရှားပြီ။ [4NACC သို့စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေး] Microinjection dopamine အဆင့်ဆင့်အတွက်ထိုး-မှီခိုတိုးပြသခဲ့သည်။ Dopamine ဆုလာဘ် circuitry တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ neurochemical ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကြွဆေး၏ Intranuclear Self-အုပ်ချုပ်မှုတစ်ခုတိုးလာဆုလာဘ်ခံစားမှုပြသခဲ့သည်။  subcortical ဒေသတွင်း၌အခြားအစိတ်အပိုင်းများလည်းနီးကပ်စွာ accumbens ချိတ်ဆက်စေခြင်းငှါအရာ, ထည့်သွင်းသည့်အပြုအမူကိုသြဇာလွှမ်းမိုး။ အစားအသောက်စားသုံးမှုနှင့်ရေစားသုံးမှု [ထိုကဲ့သို့သောနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus အဖြစ် Basal ဦးနှောက်၏အတော်ကြာအစိတ်အပိုင်းများ, လွှမ်းမိုးမှုခံရဖို့ပြသခဲ့ကြသည်6] paraventricular နျူကလိယ, septum pellucidum  နှင့် basolateral amygdala ။  စားသုံးမိအပြုအမူ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ကျယ်ပြန့်အာရုံကြောကွန်ယက်ရှိပါသည်။ [; NACC ထိုကဲ့သို့သော ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) အဖြစ်အဓိက subcortical စင်တာများ, ကောင်းစွာချိတ်ဆက်ဖြစ်ပြထားပြီး9] basolateral amygdala နှင့်အခြားစင်တာများ။  အရက်စားသုံးမှု, ဆုလာဘ်များနှင့်အစားအစာစားသုံးမှု၏မော်ဂျူတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဗိုလ်မှူး neurotransmitters ဒီဒေသမှာရှိတဲ့အာရုံကြောဆားကစ်ကနေသတင်းပေးပို့ခဲ့ကြသည်။ 
မကြာသေးမီက hypocretins, သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော peptides ၏အုပ်စုတစု, peptides အသီးသီး 1 aa နှင့်2aa ရှိခြင်း, hypocretin 32 နှင့် 29 (Orexin A နှင့် B), အ hypothalamus ကနေဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ [12တိုးမြှင့ Orexin တစ်ဦးတို့ကသက်သေနိုးနိုးကွားကွား၏တက်ကြွသောအဆင့်စဉ်အတွင်း hypothalamus တှငျတှေ့အဖြစ်] မူလကအဲဒီတ္ထုများ, အိပ်ပျော်ခြင်းနိုးစက်ဝန်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီ။  ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာကျနော်တို့ NACC သို့ထိုးသွင်းတဲ့အခါမှာ Orexin တစ်ဦးကအစားအစာနှင့်အရည်ဓာတ်များတိုးပွားလာကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။  အဆိုပါဗဟိုအုပ်ချုပ် orexin antibody ကို 24 ဇအတွက်အစားအစာစားသုံးမှုထိုး-ရသည်ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ကြွက်အစာရှောင်ခြင်း, orexin antibody ကို၏ intraperitoneal အုပ်ချုပ်ရေးအစားအစာစားသုံးမှုနှိမ်နင်းရန်ပျက်ကွက်, ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွက် orexin antibody ကိုလုပ်ရပ်များကြောင့်မဟုတ်ဘဲအဆိုပါအရံတစ်သျှူးအတွင်းကိုကိုယ်စားပြုသည်။  ထို့ပြင်၎င်းတို့သည် endogenous orexins အပြုအမူနို့တိုက်ကျွေးမှုအပေါ်ဇီဝကမ္မအခန်းကဏ္ဍရှိသည်အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ အစပိုင်းတွင် Orexins စားသုံးမိအပြုအမူကိုထိခိုက်ဖို့ postulated ခဲ့ကြသည်သော်လည်း, နို့တိုက်ကျွေးရေးအပြုအမူနှင့်အရက်စားသုံးမှုအတွက် Orexin တစ်ဦးအဘို့အခန်းကဏ္ဍနှင့်လည်းအရက် preference ကို၏သက်သေအထောက်အထားအသေအချာမသိ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်လေ့လာမှုတှငျကြှနျုပျတို့ Orexin တစ်ဦးအစာရှောင်ကြွက်များတွင်အစားအသောက်နှင့်အရည်ဓာတ်များတိုးပွားလာကြောင်းသရုပ်ပြကြသည်။  ပြတ်ပြတ်သားသားထည့်သွင်းသည့်လှုပ်ရှားမှုအတွင်း Orexin တစ်ဦး၏အခန်းကဏ္ဍကို elucidate နိုင်ရန်အတွက်ကျနော်တို့ NACC သို့ Orexin တစ်ဦးကရန် SB-334867 infusing အသုံးပြုပုံနေ့ချင်းညချင်းအစာရှောင်အထီး Wistar ကြွက်များတွင်စမ်းသပ်ချက်၏ဤ set ကိုထုတ်ဆောင်သွားကြ၏။  ငါတို့သည်လည်း Orexin ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအရက်စားသုံးမှုအပေါ်တစ်ဦးရန် elucidate မှကုသကြွက်များတွင်အရက် preference ကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ အစားအစာ, ရေနှင့်အရက်စားသုံးမှုနှင့်အရက် preference ကိုအပေါ်စမ်းသပ်ချက်၏ရလဒ်များကိုဤနေရာတွင်ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ငါးဆယ်လေးယောက်အထီး Wistar albino ကြွက် (n = 54) (250 ± 10 ဂရမ်) အလေးချိန်ဟောင်း 3-4 လအတွင်းလေ့လာမှုအတှကျရှေးခယျြခဲ့သညျ။ သူတို့ဟာ viz အုပ်စုသုံးစုခွဲခဲ့ကြသည်။ ရေအုပ်စု, အရက်အုပ်စုတစ်စုနှင့်နှစ်ဦးကိုပုလင်းအခမဲ့ရွေးချယ်မှုအုပ်စုတစ်စု (n = 18 တစ်ခုချင်းစီ) ။ ၎င်းတို့အားအဖွဲ့ခွဲ ၃ ခုခွဲခြားသည်။ အုပ်စု ၁ - ထိန်းချုပ်မှု (ဆားပြုတ်ရည်)၊ အုပ်စု (၂) - SB-1 (၃ ng)၊ အုပ်စု (၃) - SB-2 ပမာဏ (334867 ng၊ n =6တစ်ခုချင်းစီ) ။ အစားအစာနှင့်အရည်အားလုံးအုပ်စုများမှထောက်ပံ့ခဲ့သည် ကြော်ငြာ lib, နေ့ချင်းညချင်းအစာရှောင်ခြင်းအဘို့အဖော်ပြခဲ့တဲ့ဘယ်မှာမှတစ်ပါး။
အားလုံးတိရိစ္ဆာန်များသင့်လျော်ခွံအိပ်ယာအတူ polypropylene လှောင်အိမ်ထဲမှာတစ်ဦးချင်းသျောနှင့်အပူချိန်ထိန်းချုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် 12-ဇအလင်း / မှောင်မိုက်သံသရာအပေါ်ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည်။ တိရစ္ဆာန်များဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်များ၏အသုံးပြုမှုအတွက်အိန္ဒိယအစိုးရ၏တိရိစ္ဆာန်များနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များအပေါ်စမ်းသပ်ချက်များ၏ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ကြီးကြပ်မှု၏ရည်ရွယ်ချက်အဘို့အရေးကျောမတီ၏လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာတိရိစ္ဆာန် Ethical ကော်မတီကဒီလေ့လာမှု protocol ကိုအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
(မှ: Tocris bioscience) ဆား 0.9%, SB-334867 မြုံကိုရေ၌ 2% cyclodextran အတွက်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။ အသုံးပြုတဲ့အခါ, ဖြေရှင်းချက်4ရက်သတ္တပတ်မှတက်3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိမ်းဆည်းထားခဲ့ကြသည်မဟုတ်။ ဟားဗတ် Pico ပေါင်း (USA) ပြုတ်ရည်စုပ်စက်မူးယစ်ဆေးကယ်နှုတ်တော်မူရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ရေပလတ်စတစ်သောက်ရေပုလင်းထဲမှာထောက်ပံ့ခဲ့သည်နှင့်ကြွက်အစားအစာလုံးလေးများ (Hindustan Unilever, Ltd. ) ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်ထိပုတ်ပါ။ Ethyl အရက် (Absolute) (ဤသည်အာရုံစူးစိုက်မှုအရက်အာရုံစူးစိုက်မှု၏ preference ကိုအပေါ်တစ်ဦးရှေ့ပြေးလေ့လာမှု၏အခြေခံပေါ်မှာရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်) (Hayman, Ltd. , Eastways ပန်းခြံ, Witham, Essex, CM83YE, ဗြိတိန်) ဝယ်ယူကာ 10% အရက်အောင်ရောခဲ့သည် ။ Ketamine (နီယွန် Laboratories, ကန့်သတ်သိမ်း, က MS) နှင့် xylazine (အိန္ဒိယ immunological, Ltd. , Hyderabad) မေ့ဆေးများအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
အထီး Wistar albino ကြွက်, ketamine Hydrochloride (60 / ကီလိုဂရမ် mg) ၏အရောအနှောထိုးသွင်းခြင်းဖြင့် anesthetized xylazine Hydrochloride (6 mg / kg) နှင့်တစ်ဦး stereotaxic ယန္တရား (Inco, အိန္ဒိယ) မှာတပ်ဆင်ထားခဲ့သည်။ တစ်ခုကခွဲစိတ်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ခွဲစိတ်စိတ်ဝိညာဉ်နှင့်အတူ disinfected, ဦးရေပြားပေါ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဧရိယာဝါဂွမ်းနှင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်နှင့်အတူတက်သန့်စင်ခဲ့သည်။ [အချက်များ Paxinos နှင့် Watson ဟာဦးနှောက် Atlas ၏ရည်ညွှန်းအတူ NACC ရောက်ရန်သက်ဆိုင်ရာဒေသများအတွက်ဦးခေါင်းခွံပေါ်မှတ်သားခဲ့ကြသည် Coordinate17] (Bregma မှ: Anteroposterior + 2.2 မီလီမီတာ, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်± 1 မီလီမီတာနှင့်ဒေါင်လိုက် 7.4 မီလီမီတာ) ။ Burr အပေါက်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်နှင့်သံမဏိလမ်းညွှန် cannula (22 ပိတ်ကျဲစ) ကို stereotaxic သြဒီနိတ်နှင့်အညီကိုထညျ့သှငျးခဲ့သညျ။ အဆိုပါ cannula အရပ်၌ရှိပြီးတာနဲ့သူက screw နှစ်ခုနှင့်ပါးစပ်တွင်း acrylic ၏အကူအညီဖြင့်လုံခြုံသည်။ လမ်းညွှန် cannula stylet တပ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်နှင့်ကြွက်များမတိုင်မီလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်အနည်းဆုံး7နေ့ရက်ကာလအဘို့ကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ပြုတ်ရည် cannula (ပြည်တွင်းရေး cannula) ကိုင်တွယ်များအတွက်အဆင်ပြေတဲ့အချက်အချာရှိပြီးဖြစ်သော 30 gauge ၏ Septoject သံမဏိသွားအပ်ရာမှလုပ်ကြံခဲ့သည်။  ပြုတ်ရည် cannula သက်ဆိုင်ရာလမ်းညွှန် cannula ကျော်လွန် 1 မီလီမီတာကိုတိုးချဲ့။ အဆိုပါစမ်းသပ်ချက်ရဲ့ start မတိုင်မီကအားလုံးကြွက်သူတို့အစားအစာ, ရေ, 24% အရက်ကိုလက်ခံရရှိပြီးတော့ 10 ဇအစာရှောင်ခြင်းအပေါ်ထားရှိမည်ခဲ့ပြီးသောနှစ်ခုသင်တန်းကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဤသင်ခန်းစာကိုလေ့လာဆွေးနွေးစဉ်အတွင်းကြွက်အစာရှောင်ခြင်းသိလာတယ်။
ပုံမှန်ဆားနှင့် (နှစ်ခုဆေးများအတွက်) SB-334867 24 ဇအစာရှောင်ခြင်းအပြီးကြွက်များ၏သီးခြားအုပ်စုများအတွက်အသီးသီးထုံမွှန်းကြသည် ဟူ. ၎င်း, အဆိုပါလုံခြုံလမ်းညွှန် cannula မှတဆင့် unanesthetized (အခမဲ့ရွေ့လျား) ကြွက်များ။ အဆိုပါပြုတ်ရည် polyethylene ပြွန်နှင့်ပြည်တွင်း cannula နှင့်အတူချိတ်ဆက် 10 μl Hamilton ကပြွတ်ကဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဒီအပြွတ်ဟားဗတ်စုပ်စက်တပ်ဆင်အသုံးပြုရန်ခဲ့သည်။ ထိုအခါဧည့်လမ်းညွှန် cannula ထဲတွင်နေရာ stylet ဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါပြည်တွင်းရေး cannula လမ်းညွှန် cannula သို့ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်လုံခြုံခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါစုပ်စက်အခြားပြီးနောက်လက်ျာနှင့် NACC တဦးတည်း၏လက်ဝဲဘက်ခြမ်းသို့ဖြေရှင်းချက်ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါစတင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည် (ပြုတ်ရည်ပြည်တွင်းရေး cannula မူးယစ်ဆေးဝါးပျံ့နှံ့ခွင့်ပြုပါရန်အကြောင်းကို 1 s အတွက်ထွက်ခွာသွားပြီးနောက်), 10 / မိနစ်μl။ SB-334867 နှစျယောကျဆေးများ3ng (အနိမ့်ထိုး) နှင့်6ng (မြင့်သောဆေးထိုး) မှာထုံမွှန်းခဲ့ကြသည်။ ပြုတ်ရည်၏အဆုံးမှာအတွင်းပိုင်း cannula ဖယ်ရှားခဲ့သည်နှင့် stylet အနေအထားနှင့်အချိန်ပြန်နေရာချခံခဲ့ရသည်မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ပြုတ်ရည် post, အစားအစာ, ရေ, 10% အရက်၏ချက်ချင်း premeasured ပမာဏကိုသက်ဆိုင်ရာအုပ်စုများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်။ စားသုံးမှုအပေါ် SB-334867 ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအသီးသီးတိုင်းတာနဲ့မှတ်ချက်ချ, စေ့စပ်ပြုတ်ရည်အချိန်ကြားကာလ 1, 2,4နှင့် 24 ဇရက်ခံခဲ့ရသည်။ လုံးလေးများ, ရေ, နှင့်အရက်ကျော် left ဖယ်ရှားခံခဲ့ရခြင်းနှင့်စားသုံးပမာဏ (ငွေပမာဏကိုလောင် = Premeasured အရေအတွက်-left အရေအတွက်ကျော် 1 ဇ၏အဆုံးမှာဥပမာ) တွက်ချက်ခဲ့သည်။
လေ့လာမှုပြီးစီးပြီးနောက်အဆိုပါကြွက်များမေ့ဆေး၏သေစေလောက်ထိုးခွငျးအားဖွငျ့ယဇျပူဇျောခဲ့ကြခြင်းနှင့်ဦးနှောက်ကိုထုတ်ခွဲဖြာနှင့် histological အပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ ခုနစျပါးမိုက်ခရွန်ကဏ္ဍများ [ပြုတ်ရည်၏ site ကိုအတည်ပြုရန် cresyl ခရမ်းရောင်နှင့်အတူလိုက်သည်ကိုနှင့်စွန်းခဲ့ကြပုံ 1].
နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်တစ်ဦးကရန် (SB-334867) Orexin ။ ဘား 334867 မှာ (က) ရေနှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် SB-1 နှင့်အတူထိုးသွင်းကြွက်များ၏ (ခ) အစားအစာစားသုံးမှု, ကိုယ်စားပြုst, 2nd, 4th 24 (0% ဆား = Group မှ 0.9) နှင့် 1 ng SB-3 ၏ထိုးနှင့် 334867 ဇအချိန်ကာလ ...
အချက်အလက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုစာရင်းအင်းဆော့ဖ်ဝဲလ် SPSS ဗားရှင်း - ၁၆ (Windows အတွက် SPSS၊ ဗားရှင်း ၁၆.၀၊ ချီကာဂို၊ SPSS Inc. ယူအက်စ်); တစ်ဖက် - ANOVA အုပ်စုများအကြား consummatory အပြုအမူကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့ပြုလေ၏။ Inter နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်ပြုလေ၏ Post-hoc Tukey ၏စမ်းသပ်မှု (သီးခြားနှိုင်းယှဉ်လျှင်နာရီအလိုက်စားသုံးမှု၊ ဥပမာ ၁ နာရီအစားအစာစားသုံးမှုနှင့် ၁ နာရီ SB-1 ကုသသည့်အစားအစာစားသုံးမှုကိုထိန်းချုပ်သည်) ဒေတာကိုယုတ်၏စံ±အမှား±အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည် P <0.05, သိသိသာသာထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည်။
အစားအစာနှင့်ရေစားသုံးမှု (တိုင်းတာခဲ့ကြသည်n ဒီအုပ်စုထဲမှာ = 18), NACC cannulated တိရိစ္ဆာန်များ (n = 18), လူမျိုးကွဲ, Group မှ 1 (0.9% ဆားပြုတ်ရည်), Group မှ2(SB-334867-3 ng), Group မှ3(SB-334867-6 ng) သို့ခှဲဝေခဲ့ကြသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးဒေတာများအတွက်ပြသ [NACC သို့မြန်မာနိုင်ငံသထိုးသွင်းခဲ့ကြ စားပွဲတင် 1 နှင့်ပုံ Figure1a, 1a, , ခခ].
334867, 10, 1 နှင့်2ဇအချိန်ကာလမှာစားနပ်ရိက္ခာနှင့် 4% အရက်စားသုံးမှုအပေါ် SB-24 ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု (nတစ်ဦးချင်းစီအုပ်စု = 6)
1 ဇရက်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ SB-334867 ကုသမှုသိသိသာသာကျဆင်းခြင်း (F ကို [2, 15] = 9.171 ပြသပြီးနောက် p အစားအစာစားသုံးမှုအတွက် = 0.003) (Group မှ 1 vs. ဆိုလိုသည်မှာ Group မှ 3, p <0.002); သော်လည်းအဘယ်သူမျှမသိသိသာသာပြောင်းလဲမှု2ဇ (F [2, 15] = 0.190 = မှာသတိပြုမိခဲ့သည် p = 0.829);4ဇ (F ကို [2, 15] = 0.160 p = 0.854); 24 ဇ postinfusion အချိန်ကြားကာလ (F ကို [2, 15] = 4.873 p = 0.023) (Group မှ 1 vs. Group မှ 3, p <0.028; အုပ်စု ၂ နှင့်အုပ်စု ၃၊ p <0.05) ။
SB-334867 ကုသမှု (F ကို [1, 2] = 15 0.957 ဇမှာရေစားသုံးမှုအပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ပုံများအားပြသခဲ့သည် p = 0.406);2ဇ (ရေ2ဇက F [2, 15] = 0.773 p = 0.479);4ဇ (F ကို [2, 15] = 0.288 p = 0.753) postinfusion အချိန်ကြားကာလ; ဒါပေမယ့်ရေစားသုံးမှုလျော့နည်းသွားခဲ့သည်စုစုပေါင်း 24 ဇ (F ကို [2, 15] = 10.688 p ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် = 0.001) (Group မှ 1 vs. Group မှ 3, p <0.002; အုပ်စု ၂ နှင့်အုပ်စု ၃၊ p <0.006) ။
အရက် (10%) နှင့်အစားအစာစားသုံးမှု [တိုင်းတာခဲ့ကြသည်n = 18, ဒေတာအတွက် စားပွဲတင်2နှင့် ပုံ 2].
334867, 10, 1 နှင့်2ဇအချိန်ကာလမှာအစားအစာ, ရေ, 4% အရက်စားသုံးမှု (နှစ်ခုပုလင်း preference ကို) ရက်နေ့တွင် SB-24 ၏ဆိုးကျိုးများ
ထိုးသွင်း site ၏ Histological အပိုင်း: ကြွက်ဦးနှောက်ဖေါ်ပြခြင်းပြုတ်ရည်ဆိုဒ် (အနက်ရောင်မြှား) (× 7) ၏ Cresyl ဗိုင်စွန်းအပိုင်း (2.5 μ)
NACC cannulated ကြွက်သုံးအဖွဲ့ခွဲ, Group မှ 1 (0.9% ဆားခွဲခြားခဲ့သည် n = 6), Group မှ2(SB-334867-3 ng, n = 6) နှင့်အုပ်စု3(SB-334867-6 ng, n = 6) ။
1 ဇနှင့်2ဇ SB-334867 ကုသမှုမှာသိသိသာသာ 1 မှာအရက်သောက် attenuatedst ဇ (F ကို [2, 15] = 4.457 p = 0.030), (Group မှ 1 vs. Group မှ 3, p <0.004), 2nd ဇ (F ကို [2, 15] = 11.122 p = 0.001) (Group မှ 1 vs. Group မှ 3, p <0.001; အုပ်စု ၂ နှင့်အုပ်စု ၃၊ p <0.038) ။ သို့သော်4နာရီ (အရက်စားသုံးမှုအတွက်သိသိသာသာပြောင်းလဲမှုမရှိ) (F [2, 15] = 0.709) ရှိခဲ့သည် p = 0.508) နှင့် 24 ဇ (F ကို [2, 15] = 2.631 p = 0.105) ကြားကာလအသီးသီး။
သိသိသာသာ 1 ဇနှင့်2ဇ SB-334867 ကုသမှုမှာ (က F [2, 15] = 4.230 p = 0.035) attenuation အစားအစာစားသုံးမှု (Group မှ 1 vs. Group မှ 3, p <0.03); (F [2, 15] = 16.558 p = 0.000) (Group မှ 1 vs. Group မှ 2, p <0.000; အုပ်စု ၂ နှင့်အုပ်စု ၃၊ p <0.021), အသီးသီးထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ အဘယ်သူမျှမသိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲများကို4ဇ (F [2, 15] = 0.070 မှာသတိထားမိခဲ့ကြသည် p = 0.933) ။ (0-24 ဇ) ကစုစုပေါင်းအစားအစာစားသုံးမှုလျော့နည်းသွားခဲ့သော်လည်း (F ကို [2, 15] = 4.457 p = 0.030) (Group မှ 1 vs. Group မှ 3, p <0.025) ။
စမ်းသပ်မှု III ကို
အစားအစာ, 10% အရက်နှင့်ရေ [နှစ်ခုပုလင်း preference ကို, စားပွဲတင် 2] စားသုံးမှုတိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ NACC cannulated ကြွက်ခွဲ Group မှ 1 (0.9% ဆား, အဖြစ်အုပ်စုဖွဲ့ခဲ့ကြသည် n = 6), Group မှ2(SB-334867-3 ng, n = 6) နှင့်အုပ်စု3(SB-334867-6 ng, n = 6), ထိုးသွင်းခဲ့ကြသည်။
334867 ဇ (F ကို [1, 2] = 15 မှာ SB-5.111 ကုသမှု p = 0.02) attenuation အစားအစာစားသုံးမှု (Group မှ 1 vs. Group မှ 3, p <0.011) ဒါပေမယ့်အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာခြားနားချက်2ဇ,4ဇ (F [2, 15] = 0.093 မှာလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည် p = 0.911), (F ကို [2, 15] = 0.797 p = 0.469), အသီးသီးနှင့် 24 ဇမှာရန်နှစ်ခုစလုံးထိုး (F ကို [2, 15] = 12.698 အစားအစာစားသုံးမှုအတွက်ကျဆင်းခြင်းပြသ p = 0.001) Group မှ 1 နှင့် Group မှ2vs. (Group မှ 3, p <0.039, p <0.000, အသီးသီး) ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
SB-334867 ကုသမှု (F ကို [1, 2] = 15 0.584 ဇမှာအချိန်ကြားကာလနှင့်အတူမည်သည့်အုပ်စုတွင်ရေစားသုံးမှုမပြောင်းလဲမှုကိုထုတ်လုပ် p = 0.578),2ဇ (F ကို [2, 15] = 0.662 p = 0.530),4ဇ (F ကို [2, 15] = 1.655 P = 0.224) နှင့် 24 ဇ (F ကို [2, 15] = 0.513 p = 0.609) ။
အရက် (10%) စားသုံးမှု
334867 ဇမှာ SB-1 ကုသမှု attenuated အရက်စားသုံးမှု (F ကို [2, 15] = 9.098 p = 0.003), (Group မှ 1 နှင့် Group မှ2vs. Group မှ 3, p <0.004, p <0.008, အသီးသီး) ။2နာရီ (F [2, 15] = 0.854 = မည်သည့်အုပ်စုတွင်အရေးပါမှုအပြောင်းအလဲမရှိပါ p = 0.446),4ဇ (F ကို [2, 15] = 0.931 p = 0.416) နှင့် 24 ဇ (F ကို [2, 15] = 0.349 p = 0.711), အသီးသီး။
1 မှာအုပ်စုများတွင်မဆိုအဘယ်သူမျှမသိသိသာသာပြောင်းလဲမှု,st ဇ (F ကို [2, 15] = 2.064 p = 0.161), 2nd ဇ (F ကို [2, 15] = 1.023 p = 0.383), 4th ဇ (F ကို [2, 15] = 1.205 p = 0.327) နှင့် 24 ဇ (F ကို [2, 15] = 0.484, p = 0.626) ။
အမျိုးမျိုးသော neurochemicals အားဖြင့်အစားအစာနှင့်ရေစားသုံးမှု၏ Modulation စိစစ်အောက်မှာဖြစ်ခဲ့သည်။ အရက်စားသုံးမှုအပါအဝင်နို့တိုက်ကျွေးရေးအပြုအမူကိုထိခိုက်ပြခဲ့ကြရာအများအပြားကိုယ်စားလှယ်လောင်းမော်လီကျူး, အနက် Orexins လည်းပတ်သက်သည်ဟုယူဆရနေကြသည်။  Orexins မူလကစားသုံးမိလှုပ်ရှားမှုများ၏အစားအစာစားသုံးမှုနှင့်စည်းမျဉ်း၏စိတ်ကြွဆေးဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည် ဟူ. ၎င်း, နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကအိပ်စက်ခြင်းနဲ့နိုးပြည်နယ်များကိုထိခိုက်တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။  Dube et al။ Orexins ၏ဗဟိုအုပ်ချုပ်ရေးအဓိကအား hypothalamus အတွက်ဗဟိုပြု, ထည့်သွင်းသည့်အပြုအမူအတွက် modulatory အခန်းကဏ္ဍရှိကြောင်းသရုပ်ပြကြသည်။  ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စုပ္ပန်စမ်းသပ်မှုတှငျကြှနျုပျတို့ NACC အပေါ် Orexin ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ဦးကရန် (SB-334867) စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ NACC စွဲနှင့်နို့တိုက်ကျွေးရေး-related လှုပ်ရှားမှုများအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည်။  Orexins လည်း NACC ၏ဤလုပ်ဆောင်ချက်ဖျန်ဖြေခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီ။  သို့သော်လည်း NACC [နှစ်ခု histologically ကွဲပြားခရိုင်ပြသ23] အလုပ်လုပ်တဲ့ကွဲပြားခြားနားမှု [ရှိစေခြင်းငှါအရာ24] နှင့်၎င်းတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုသိသိသာသာထပ်တို့အားထင်ရှားလေ၏။  ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်စမ်းသပ်ချက်တှငျကြှနျုပျတို့ microinjection technique ကိုသုံးပြီး NACC သို့ Orexin တစ်ဦး၏ပြုတ်ရည်ကိုချက်ချင်းပြုတ်ရည်ပြီးနောက်နာရီအတွင်းအစားအစာနှင့်ရေစားသုံးမှုတိုးပွားလာပေမယ့်နှစ်ဦးကိုပုလင်းအခမဲ့ရွေးချယ်မှုအားဖြင့်စမ်းသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအရက်စရာအထူးသဖြင့် preference ကိုရှိကွောငျးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။  ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သ NACC သို့ Orexin တစ်ဦးကရန်ထိုးသွင်းရန်ကြိုးစားခဲ့ခြင်းနှင့်နေ့ချင်းညချင်းအစာရှောင်ရာကြွက်အတွက်အစားအစာစားသုံးမှု, ရေစားသုံးမှုနှင့်အရက်စားသုံးမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။
1 အတွက်စားသုံးမှုst ဇသိသိသာသာ orexin ရန်-ကုသတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုကိုထပ်မံတိုက်ကျွေးအပြုအမူအတွက် Orexin တစ်ဦး၏အခန်းကဏ္ဍကိုထေူ၏။ Orexin အဲဒီ receptor အမျိုးအစား 1 (OX1R) ရန် SB-334867 ပြုတ်ရည်ဟာနို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်အရက်သောက် attenuates ။ Orexin တစ်ဦးကတစ်သမတ်တည်းတိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်အရက်သောက်အပေါ် stimulatory အကျိုးသက်ရောက်မှုပြသခဲ့သည်။ OX1R ရန် [ခထက် Orexin တစ်ဦးအဘို့အ 10 ကြိမ် သာ. ကွီးမွတျဆှဖှေဲ့ရှိပါတယ်26,27]
Orexinergic အာရုံခံအဆိုပါ AccSh မှပရောဂျက်များနှင့်နှစ်ဦးစလုံး orexin receptors (OX1R နှင့် OX2R) OX2R ကြီးမြတ်သောအတိုင်းအတာအထိရှိပါကြောင်းနှင့်တကွ, NACC အတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြသည်။ [28,29] Orexin တစ်ဦးက GABAergic ရေစီးကြောင်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အထီးကျန် accumbens အာရုံခံအတွက် N-methyl-D-aspartate ရေစီးကြောင်းလျော့နည်းသွားသည်။  အပြင်, orexins dopaminergic VTA အာရုံခံ excite ။  dopaminergic VTA အာရုံခံကတည်းက innervate နှင့် AccSh GABAergic (inhibitory) အာရုံခံ excite, orexin အချက်ပြနောက်ထပ်သူတွေရဲ့စားသောက်အပြုအမူများထပ်မံတိုးမြှင့်အတွက်ရလဒ်, အ VTA အတွက်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့် ACC အတွက်ဒေသခံတားစီးတိုးမြှင့်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမဲ့ဒီ [Baldo နှင့်ကယ်လီတို့ကဆန့်ကျင်ခဲ့သည်32] အချင်းချင်းအပြန်အလှန် AccSh Orexin အေနှင့်အတူနို့တိုက်ကျွေးရေးသို့မဟုတ် locomotor လှုပ်ရှားမှုအပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်တွေ့သောသူ
ကျနော်တို့အရက်သုံးစွဲမှု၏တစ်ဦး modulator တွေကိုအဖြစ်သရုပ်ဆောင် Orexin တစ်ဦးက [များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုစမ်းသပ်စားပွဲတင် 2] အစားအစာနှင့်အတူ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်လေ့လာမှုကနေကျနော်တို့ကြွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယခင်လေ့လာမှုမှာအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ထားပြီးဖြစ်သော 10% solution ကိုမှာအရက်လောင်ဖို့ပိုမိုနှစ်သက်ကြောင်းတည်ထောင်ခဲ့သည်။  ထို့ကြောင့်ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ NACC သို့မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ပြုတ်ရည်ကိုအောက်ပါဒီ dilution အတွက်အရက်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ချက်ချင်း Orexin တစ်ဦးကရန်များ၏ပြုတ်ရည်ကိုအောက်ပါနာရီအတွင်းအရက်စားသုံးမှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောကျဆင်းခြင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မြင့်မားထိုး (3 ng) အုပ်စုတွင်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့စဉ်အစားအစာနှင့်ရေစားသုံးမှုအတွက်ကျဆင်းနိမ့်ထိုး (6 ng) ပြုတ်ရည်အုပ်စုတွင်အနိမ့်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအရက် preference ကိုစမ်းသပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျနော်တို့တဦးတည်းရေပုလင်းများနှင့်အခြားပါဝင်တဲ့ 10% အရက်တစ်ပြိုင်နက်ထောက်ပံ့ပေးရာနှစ်ခုပုလင်းရွေးချယ်မှုအခြေအနေနှင့်အတူကြွက်များဖြစ်သည်။ အဆိုပါ Orexin ၏ပြုတ်ရည်ကိုအောက်ပါတစ်ဦးကရန်အစားအစာစားသုံးမှုနှင့်အရက်စားသုံးမှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောကျဆင်းမှုကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျဆင်းမှု၏ဤအမျိုးအစားနိမ့်နှင့်အမြင့်မားတဲ့ထိုးအတွက်ဒါပေမဲ့ 1 ဖို့ကန့်သတ်နှစ်ခုလုံးကိုရှာတွေ့ခဲ့သည်st အဆိုပါပြုတ်ရည်ပြီးနောက်ဇ။ သို့သျောလညျး, အစားအစာစားသုံးမှုအတွက်ကျဆင်းမှုသည်ရေသို့မဟုတ်အရက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုသိသိသာသာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကသက်သေအထောက်အထားအစားအစာစားသုံးမှုဖြစ်စေ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် Orexin တစ်ဦး၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုများအတွက်ထောက်ခံမှုပေးသည်ပေမယ့်အရက်များအတွက်ဦးစားပေးများတွင် Orexin တစ်ဦးကပါဝင်ပတ်သက်မှု၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုထောကျပံ့မပေးပါဘူး။
ဇီဝနည်းပညာဦးစီးဌာန, DBT ရန်ပုံငွေစီမံကိန်း၏အပိုင်း, Ref: Ref: BT / PR14012 / Med / 30 / 315 / 2010 အိန္ဒိယ 30.09.2010 အစိုးရရက်စွဲပါ။
အဆိုပါစာရေးဆရာဘဏ္ဍာရေးထောက်ပံ့မှုကိုအဘို့, ဇီဝနည်းပညာ, အိန္ဒိယအစိုးရအဖွဲ့ဦးစီးဌာနမှကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ပေးထားသောအဆောက်အဦများအတွက် Kasturba ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကောလိပ်, Mangalore, Manipal တက္ကသိုလ်။
1 ။ Trojniar W က, Plucinska K ကို Ignatowska-Jankowska B က, အနျူကလိယမှ Jankowski အမ်ပျက်စီးခြင်း shell ကို accumbens သော်လည်းမ core ကို ventral tegmental ဧရိယာဆွ-သွေးဆောင်နို့တိုက်ကျွေးရေးချို့ယွင်း။ J ကို Physiol Pharmacol ။ 2007; 58 (ပျော့ပျောင်း 3): 63-71 ။ [PubMed]
2 ။ မာတီ VN, အမြှေးပါးဂုဏ်သတ္တိများ, KC ရေစီးကြောင်းနှင့်နျူကလိယ၏ glutamatergic Synaptic ရေစီးကြောင်းထဲမှာ Spigelman ဗြဲ Long-တည်တံ့ပွောငျးလဲအရက်မှီခိုနေတဲ့ကြွက်မော်ဒယ်အတွက်အလတ်စား spiny အာရုံခံ accumbens ။ တပ်ဦး neuroscience ။ 2012; 6: 86 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
3 ။ Henderson ကို MB, အစိမ်းရောင် AI အ, ဘရက်ဖို့ဒ PS, Châu၎င်းကို, Roberts သည် DW, Leiter JC ။ နျူကလီးယပ် accumbens ၏နက်ရှိုင်းသောဦးနှောက်ကိုဆွအရက်- သာ. နှစ်သက်ကြွက်များတွင်အရက်စားသုံးမှုလျော့နည်းစေသည်။ Neurosurg အာရုံစိုက်။ 2010; 29: E12 ။ [PubMed]
4 ။ Stratford TR, ကယ်လီ AE ။ နျူကလီးယပ်အတွက်ဂါဘမြို့သား shell ကိုနို့တိုက်ကျွေးရေးအပြုအမူ၏ဗဟိုစည်းမျဉ်းများတွင်ပါဝင် accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 1997; 17: 4434-40 ။ [PubMed]
5 ။ ဟာနန်ဒက်ဇ် L ကို, Lee က F ကို, Hoebel BG ။ လွတ်လပ်စွာကြွက်ရွေ့လျား၏နျူကလိယ accumbens နှင့် striatum အတွက်တစ်ပြိုင်နက် microdialysis နှင့်စိတ်ကြွဆေးပြုတ်ရည်: extracellular dopamine ပေါများနှင့် serotonin ။ ဦးနှောက် Res Bull ။ 1987; 19: 623-8 ။ [PubMed]
6 ။ ဟာနန်ဒက်ဇ် L ကို, Hoebel BG ။ နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့် hypothalamic ဆွဟာ accumbens အတွက် dopamine လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်တိုးမြှင့်။ Physiol ပြုမူနေ။ 1988; 44: 599-606 ။ [PubMed]
7 ။ Maejima Y ကို, Sakuma K ကို Santoso က: P, Gantulga: D, Katsurada K ကို Ueta Y ကို, et al ။ hypothalamus အတွက် POMC အာရုံခံ arcuate မှ paraventricular နှင့် supraoptic အရေးပါထံမှ Oxytocinergic circuit ကို။ FEBS လက်တ။ 2014; 588: 4404-12 ။ [PubMed]
8 ။ Ganaraja B, Jeganathan ဆာ။ basolateral amygdala နှင့်ကြွက်များတွင်စားသုံးမိခြင်းနှင့်အရသာ preference ကိုအပေါ် ventromedial hypothalamic ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ အိန္ဒိယ J ကို Med Res ။ 2000; 112: 65-70 ။ [PubMed]
9 ။ Narayanan NS, Guarnieri DJ သမား, DiLeone RJ ။ ဇီဝဖြစ်စဉ်ဟော်မုန်း, dopamine ဆားကစ်များနှင့်နို့တိုက်ကျွေး။ တပ်ဦး Neuroendocrinol ။ 2010; 31: 104-12 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
10 ။ ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA ။ Dopamine, သင်ယူမှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှု။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2004; 5: 483-94 ။ [PubMed]
11 ။ Koob gf ။ အရက်စွဲ၏ Neurocircuitry: တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှသည် Synthesis ။ Handb Clin Neurol ။ 2014; 125: 33-54 ။ [PubMed]
12 ။ Sakurai T က, Amemiya တစ်ဦးက, Ishii M က, Matsuzaki ငါ Chemelli RM, Tanaka H ကို, et al ။ Orexins နှင့် orexin receptors: hypothalamic neuropeptides နှင့်အပြုအမူအစာကျွေးထိန်းညှိကြောင်း, G ပရိုတိန်း-coupled receptors တစ်မိသားစု။ cell ။ 1998; 92: 573-85 ။ [PubMed]
13 ။ လျူ Y ကို, Zhao နှင့် Y ကို, Ju က S, Guo အယ်လ် Orexin တစ်ဦးက OX1R ၏ပရိုတိန်းစကားရပ် upregulates နှင့် ERK အချက်ပြလမ်းကြောင်းမှတဆင့် SGC-7901 အစာအိမ်ကင်ဆာဆဲလ်များ၏ပြန့်ပွားပိုကောင်းစေပါတယ်။ int J ကို Mol Med ။ 2015; 35: 539-45 ။ [PubMed]
14 ။ Mayannavar S က, Rashmi KS, Rao ကကိုက်, Yadav က S, အထီး Wistar ကြွက်များတွင်သူတွေရဲ့စားသောက်အပြုအမူနှင့်အရက် preference ကိုအပေါ်နျူကလိယ accumbens အတွက် orexin-တစ်ဦးကပြုတ်ရည်၏ Ganaraja ခ Effect ။ အိန္ဒိယ J ကို Physiol Pharmacol ။ 2014; 58: 319-26 ။ [PubMed]
15 ။ Yamada H ကို, Okumura T က, Motomura W က, Kobayashi Y ကို, အစားအစာစားသုံးမှု၏ Kohgo Y. တားစီးအစာရှောင်ကြွက်များတွင် Anti-orexin antibody ကို၏ဗဟိုဆေးထိုးသည်။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး Biophys Res Community ။ 2000; 267: 527-31 ။ [PubMed]
16 ။ စမတ်: D, Sabido-သည်ဒါဝိဒ်ကို C, et al Brough SJ, Jewitt က F, Johns တစ်ဦးက, Porter RA ။ SB-334867-A: ပထမဦးဆုံးရွေးချယ် orexin-1 အဲဒီ receptor ရန်။ br J ကို Pharmacol ။ 2001; 132: 1179-82 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
17 ။ Paxinos, G, Watson ဟာ C. လန်ဒန်: ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; 1998 ။ Stereotaxic Coordinates အတွက် Rat ဦးနှောက်။
18 ။ Mayannavar S က, Rashmi KS, Deshpande K ကို Pai SR, အသေးစားတိရိစ္ဆာန်များအတွက် neuroactive တ္ထုများ၏ intracranial Micro-ပြုတ်ရည်ဘို့အကြမ်းခံ cannula ၏ Ganaraja ခဘိတ်။ int J ကိုဆန်းသစ်သော Res သိပ္ပံ Eng Technol ။ 2013; 2: 6032-8 ။
19 ။ ဝီလီ JT, Chemelli RM, Sinton CM, Yanagisawa အမ်ကိုစားရန်သို့မဟုတ်အိပ် ?. နို့တိုက်ကျွေးရေးမနိုး၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် Orexin ။ Annu ဗြာ neuroscience ။ 2001; 24: 429-58 ။ [PubMed]
20 ။ Thorpe AJ, Kotz CM ။ နျူကလီးယပ်အတွက် Orexin တစ်ဦးကနို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှုလှုံ့ဆော် accumbens ။ ဦးနှောက် Res ။ 2005; 1050: 156-62 ။ [PubMed]
21 ။ Dube MG, Kalra SP, Kalra ဆာ။ လုပ်ဆောင်ချက် hypothalamic ဆိုဒ်များသတ်မှတ်ခြင်း: အစားအသောက်စားသုံးမှု orexins / hypocretins ၏ဗဟိုအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်ရူးနှမ်း။ ဦးနှောက် Res ။ 1999; 842: 473-7 ။ [PubMed]
22 ။ ကယ်လီ AE ။ အစာစားချင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှု၏ Ventral striatal ထိန်းချုပ်မှု: စားသုံးမိအပြုအမူအတွက်အခန်းက္ပနှင့်ဆုလာဘ်-related သင်ယူမှု။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2004; 27: 765-76 ။ [PubMed]
23 ။ Salgado S က, Kaplitt MG ။ နျူကလီးယပ် Accumbens: တစ်ဦးကဘက်စုံပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ Stereotact Funct Neurosurg ။ 2015; 93: 75-93 ။ [PubMed]
24 ။ Ramaswamy ကို C, Ghosh က S, အရသာနှင့်အာဟာရတန်ဖိုး၏စည်းကမ်းချက်များ၌အစာအာဟာရဝတ္ထုများ၏ preference ကို၏ Vasudev R. ပြင်ဆင်ခြင်းနျူကလိယ accumbens နှစ်ခု subdistricts ၏တွေ့ရှိရပါသည်အောက်ပါ။ အိန္ဒိယ J ကို Med Res ။ 1998; 108: 139-44 ။ [PubMed]
25 ။ Stratford TR, ကယ်လီ AE ။ နျူကလီးယပ်အတွက်ဂါဘမြို့သား shell ကိုနို့တိုက်ကျွေးရေးအပြုအမူ၏ဗဟိုစည်းမျဉ်းများတွင်ပါဝင် accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 1997; 17: 4434-40 ။ [PubMed]
26 ။ ဟေး AC အဂျက်ဆင် B, Overend P ကို, ဘာကင်ဟမ် RE, Wilson က S နဲ့, Tadayyon M က, et al ။ ကြွက်များတွင်အစာကျွေးအပေါ် orexins ၏တစ်ခုတည်းနှင့်နာတာရှည် intracerebroventricular အုပ်ချုပ်ရေးဆိုးကျိုးများ။ Peptides ။ 1999; 20: 1099-105 ။ [PubMed]
27 ။ Muroya S က, Funahashi H ကို, Yamanaka တစ်ဦးက, Kohno: D, et al Uramura K ကို Nambu T က။ Orexins (hypocretins) တိုက်ရိုက် leptin တစ်ဦးအပြန်အလှန်ထုံးစံ၌ Ca2+ အချက်ပြထိန်းညှိဖို့ neuropeptide Y ကို, POMC နှင့်ဂလူးကို့စ-တုံ့ပြန်မှုအာရုံခံတွေနဲ့အပြန်အလှန်: အ mediobasal hypothalamus အတွက် Orexigenic အာရုံခံလမ်းကြောင်း။ EUR J ကို neuroscience ။ 2004; 19: 1524-34 ။ [PubMed]
28 ။ Cluderay je, Harrison, DC, Hervieu GJ ။ ကြွက်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွင်း orexin-2 အဲဒီ receptor ၏ပရိုတိန်းဖြန့်ဖြူး။ စည်းမျဉ်း Pept ။ 2002; 104: 131-44 ။ [PubMed]
29 ။ lu XY, Bagnol: D, Burke က S နဲ့, Akil H ကို, Watson ဟာ SJ ။ အစာရှောင်ခြင်းအပျေါမှာဦးနှောက်ထဲမှာ OX1 နှင့် OX2 orexin / hypocretin အဲဒီ receptor messenger ကိုအာအန်အေ၏ differential ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်စည်းမျဉ်း။ Horm ပြုမူနေ။ 2000; 37: 335-44 ။ [PubMed]
30 ။ မာတင်, G, Fabre V ကို, Siggins ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းသည်နျူကလိယ accumbens အတွက် neurotransmitters အတူ hypocretins ၏က de Lecea အယ်လ် Interaction ။ စည်းမျဉ်း Pept ။ 2002; 104: 111-7 ။ [PubMed]
31 ။ Nakamura T က, Uramura K ကို Nambu T က, တံတား T က, Goto K ကို Yanagisawa က M, et al ။ Orexin-သွေးဆောင် hyperlocomotion နှင့် stereotypy အဆိုပါ dopaminergic သည့်စနစ်ကကမကထပြုခဲ့ကြသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 2000; 873: 181-7 ။ [PubMed]
32 ။ Baldo BA, ကယ်လီ AE ။ ကြွက်နျူကလိယသို့ Amylin ပြုတ်ရည်အစွမ်းထက်မော်တာလှုပ်ရှားမှုနှင့်စားသုံးမိအပြုအမူ depresses accumbens ။ Integrated comp Physiol စည်းမျဉ်း J ကို Physiol ဖြစ်၏။ 2001; 281: R1232-42 ။ [PubMed]
33 ။ Mayannavar SK ကို, Shiva RK, Aithal K ကို Bhat RM, Wistar ကြွက်များတွင်သူတွေရဲ့စားသောက်အပြုအမူအပေါ်နျူကလိယ accumbens ၏နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန်တွေ့ရှိရပါသည်၏ Ganaraja ခ Effect ။ J ကို Pharm Res ။ 2013; 7: 263-6 ။
ဆေးဝါးဗေဒ၏အိန္ဒိယဂျာနယ်ကနေဆောင်းပါးများဒီနေရာမှယဉျကြေးထောက်ပံ့ပေးနေကြတယ် Medknow ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း